Soo-saareyaasha Turtle Basking Platforms Plars - Soo-saareyaasha Beeraleyda Shiinaha iyo Warshadaha Shiinaha
Sifeeyaha Qufulka ee kala-sooca
Sheyga Magaca Quudrant shaandhaynta ee sagxadda sicirka badeecadaha Sheegitaankiisa sheyga midabka H: 6.2cm R: 10.5 ~ 19.2cm Waxyaabaha Alaabada Caddaan ee loo yaqaan 'PP Product Number' NFF-53 Waxyaabaha Tilmaamaha Santuuqa filterka iyo matoorka biyuhu waxay ku qarsoon yihiin barta korantada, taas oo badbaadisa meel bannaan oo u muuqata qurux. . Meesha ay ka marayaan biyo balaastig ahi way sarreeyaan si loo fududeeyo daadguraynta biyaha. Ku shaandhee 2 lakab oo cudbi ah marinka biyaha. Hordhaca Alaabada ayaa ku habboon xayawaannada kala duwan, qoolleyda, rahyada, ...
Dooxada farxadda leh
Magaca Badeecada Turtle faraxsan Dooxada Sheyga Sifeynta Midabka Alaabta 24.8 * 14 * 4.3cm Waxyaabaha badeecada Madow PP Waxyaabaha alaabada NF-11 Tilmaamta jimicsiga marka aad ku ciyaareyso. Ku daydo qaab dabiici ah, qurux iyo waxtar leh. Iyada oo la adeegsanayo barkinta iyo barkadda dabaasha ayaa ku habboon wax-ka-qabashada qulqulaha. Hordhac Alaabta Waxay la timaadaa weel quudin ah. Turtles ayaa labadaba ciyaari kara oo wax ku cuni kara dooxada faraxsan. Wadooyinka tunelada waxay kordhin karaan xiisaha sahaminta iyo xaddiga jimicsiga ...
Isugeynta isugeynta jasiiradda (bidix)
Summadaha Isku-darka isugeynta jasiiradda (bidix) Tilmaanta sheyga Midabka 24.5 * 8 * 6.5cm Badeecada Alaabada Cuntada PP Waxyaabaha Tilmaameedka NF-12 Noocyada Salka, gunta baska, waxay ku qarisaa saddex hal. Sanduuqa miiraha iyo matoorka biyaha ayaa lagu qariyey meesha wax lagu keydiyo, taas oo meel dhigaysa meel sare oo u muuqata qurux. Meesha ay ka marayaan biyo balaastig ahi way sarreeyaan si loo fududeeyo daadguraynta biyaha. Ku shaandhee 2 lakab oo cudbi ah marinka biyaha. Hordhaca alaabada ayaa ku haboon al ...
Balaastikadda Dabaqa Barafka ah ee Caagga Weelka
Magaca Badeecada Balaastikada Balaastikada Dabaqa ah ee Dalxiiska Badeecadaha Dalxiiska Kalluunka Ka kooban 8 * 15 * 4.5cm 12 * 20 * 5cm 20 * 24 * 5.5cm 31.5 * 36 * 6.5cm Waxyaabaha Cad ee Alaabada Cabbirka PP Alaabada Alaabada NF-09 Waxyaabaha Tilmaameedka Afarta cabbir ee la xusho. Iyada oo cunta cuntada. Iyada oo koobabka nuugo xoog badan. Barxada saldhiga, jaranjarada, jaranjarooyinka quudinta iyo dhuumashada 4 ee 1. Hordhac Alaabta Wax soo saarku waxay ka samaysan tahay qalab PP ah, ma-sun ah iyo wax aan dhadhan lahayn, oo lagu heli karo afar cabbir. Dhamaan floatinka ...
Cilimaynta Xariijinta Buundada Bridge
Summadaha Magaca Buundada Shaambada Dhadhanka Cilladaha Bullaacadda Sifeynta Sharaxaadda Alaabada Alaabada Alaabada 170 * 105 * 70mm Badeecadda Alaabada Cuntada PP Waxyaabaha alaabada NF-07 Waxyaabaha Tilmaamaha Isticmaalka sheyga balaastigga ah ee tayo sare leh, oo aan sunta lahayn iyo aan dhadhamin, waara oo aan miridhku lahayn. Wuxuu la imanayaa meel lagu quudiyo. Waxay u adkeysan kartaa culeys dhan 2 kg. Suunka adag ee garabka ku habboon, ayaa ku habboon meelaha jilicsan sida dhalada iyo acrylic. Hordhac Alaabta ayaa ku habboon dhammaan noocyada kuniyo biyo leh iyo se ...
Isugeynta isugeynta jasiiradda (midig)
Magaca Badeecada Isugeynta Isugeynta jasiiradda (midig) Tilmaamaha Sheyga 196 * 14 * 6.7cm Alaabta Waxyaabaha Alaabada Cabbirka PP Waxyaabaha alaabada NF-10 Noocyada Jaranjarada, madal galka, weelka cuntada, afar meelood meel. Afarta lugood waa la taageeray, xasilloon oo ma fududa in la jabiyo. Kaliya waxaa loo isticmaali karaa koobabka nuugista, ama waxaa lagu xiri karaa salka geynta shaandhada. Hordhac Alaabta wuxuu ku habboon yahay dhammaan noocyada kuniyo kun iyo biyo-qabatinnada biyaha-semi-aquatic ah. Adeegsiga pl-tayo sareysa ...
Caarada Caleenta Caagga Caagga ah
Magaca badeecada caaga ah ee caarada caleenta jumladaha calaamadaha sheyga midabka leh 20 * 15.5 * 10.5cm 15 * 10.5 * 6.5cm Alaabada Alaabada Jaalaha ah ee loo yaqaan 'PP Product Number' NF-03 / NF-04. Dareenka mathalka, ma fududa in la liqo oo la xidho Koobab adag, waxay u adkeysan karaan culeys ka yar 3 kg waana mid waara. Hordhac Alaabada Alaabada ayaa soo duubtay qalab cusub oo dhumuc weyn leh, qaabeynta qaabka caleen, mid fudud laakiin aan sahlanayn. Ubax dhan ...
Balaastik Basket ah oo Caag ah
Magaca Alaabada caaga ah Eggshell Basket Island Tilmaamaha Waxyaabaha Sheyga 19.5 * 15 * 11cm 15 * 10.5 * 8.5cm Caddaan / Jaale / Alaabada Alaabta Alaabada PP Waxyaabaha alaabada NF-01 / NF-02 Waxyaabaha Alaabada laga soo dejiyey ee PP ah, aan sun ahayn iyo aan dhadhan lahayn. Dareenka mathalka, ma fududa in la liqo oo la xidho Koobab adag, waxay u adkeysan karaan culeys ka yar 10kg waana mid waara. Hordhac Alaabada Wax soo saarku wuxuu qaadaa qalab cusub oo dhumuc weyn leh oo 'PP' ah.
Magaca Badeecada Turtle Basking Platform Platform Sumcooyinka Waxyaabaha Sheega 18.5 * 15 * 14.5cm 29 * 24 * 31cm 40.5 * 18 * 41cm Alaabada Alaabada Jaalaha Alaabada Alaabada Alaabada Alaabada NFF-07 / NFF-08 / NFF-09 Tilmaamaha Waxsoosaarka Fasaxyada Xeebta, madal ayaa si toos ah u sabayn doonta oo u qulqulaya si waafaqsan heerka biyaha. Waxaa jira koollo nuugitaan ah oo ku yaal meesha ugu hooseysa istaagga, kuwaas oo hagaajin kara marinka saldhiga salka hoose kana horjoogsan kara inuu ku dul sabuubo meel kasta. Jaranjarada waxay leedahay xariiq xagga wajiga ...